बिहे भएको पुरुषसंग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यस्ता छन ६ कारण हरु – Online Nepal Site
आजको दिन एउटा संघर्षशील आमाको जन्म
खातामा बैंकले झुक्किएर ३१ करोड हालिदियो, यि युवतीले सबै पैसा खर्च गरिदिएपछि बैंक जिल्ल!
किन आउछ अनुहारमा कालो पोतो ? यसरी पाउनुहोस् सधैका लागि छुटकारा
मुख्य पृष्ठ /Intresting/बिहे भएको पुरुषसंग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यस्ता छन ६ कारण हरु
हरेक महिला आफ्नो पा’र्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने आफुलाई बुझ्ने खाल को होस् भन्ने चाहान्छन त्यसैले युवतीहरु आफु भन्दा अलि बढी नै उमेर भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन तर कोहि युवती भने बिहे भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन कारण यस्तो छ हेर्नुहोस
हाम्रो समाजमा अधिकांस जोडीको उमेर ज्यादै फरक हुन्छ । केही अपवाद छोडेर सबैजसो जोडीमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम उमेरका नैहुने गर्दछन्। खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला खोजेर यस्तो भएको होइन बरु महिलाहरु नै आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुषसँग स’म्बन्ध राख्न चाहन्छन्। हालसालै गरिएको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
४-शान्ति महसुस् : महिलाहरु छिटो आत्तिने र रिसाइरहने हुन्छन् । साना साना कुरामा पनि आत्तिनु र रिसाइ हाल्ने महिलाको बानी हो । त्यसकारण यस्तो कुरा बुझ्नका लागि र सम्हाल्नका लागि पाका उमेरका पुरुषको खोजीमा युवतीहरु हुन्छन् । आफूलाई मानसिकरुपमा सम्हाल्न सक्ने र ढाडस दिन सक्ने पुरुषलाई पति वा प्रेमी बनाउन महिलाहरु उद्दत हुन्छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यी हुन् पिपलको पूजा गर्दा मिल्ने पाँच चमत्कारिक फाइदा
मोबाइल कहिल्यै नबिग्रियोस् भन्ने चाहानुहुन्छ ? बिर्सेर पनि नगर्नुस् यी गल्ती